Accueil > Gazetin'ny nosy > Fisondrotan’ny vidin-tsolika: Nahazo fanampiana ny mpitatitra
Fisondrotan’ny vidin-tsolika: Nahazo fanampiana ny mpitatitra
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly alatsinainy faha 09 aprily 2018 ny minisitra ny Angovo sy ny rano ingahy Lantoniaina Rasoloelison tetsy amin’ny trano fiasany tetsy Ambohijatovo. Mahakasika ny fisondrotan’ny vidin-tsolika eny amin’ny toby fizarana lasantsy no anton’izany. Niaraha-nahalala fa nisondrotra 90ariary izany ny voalohan’ny volana aprily 2018 lasa teo. Iray andro taorian’izay nefa dia nanapa-kevitra indray ny governemanta fa averina amin’ny vidiny teo aloha ihany izany. Herinandro mahery aty aorina dia nasondrotra 70 ariary ny litatra ny “gasoil” sy ny “essence” ary 30 ariary ny solika fandrehitra. Izany hono no fanapahan-kevitra noraisina rehefa nifanaraka ny mpivarotra sy ny governemanta.
Tamin’izay fotoana izay dia nanao fanambarana koa ny mpitatitra amin’ny taxi-be eto Antananarivo sy ny manodidina fa hampiakatra ny saran-dàlana.
Tapaka ary fa homena fanampiana ny mpitatitra eto Madagasikara mba hitsinjovana ny mpanjifa hono. Tsy voalaza ny vola homena ireto mpitatitra ireto amin’izany fa tsiambaratelo hono hoy ingahy minisitra.
Fitsinjovana ny vahoaka marina ve no misy sa fahatahorana ilay fanondrotana ny saran-dàlana izay mety hampitroatra ireto farany? Raha tonga tamin’izany tokoa dia mety hitarika fitokonana teo amin’ny mpandeha koa ny raharaha.
Mahakasika ity fanampiana ny mpitatitra ity dia mpitatitra ara-dalàna maro no tsy nahazo izany. Matetika dia tompon’ny fiara vitsivitsy ihany sy filohan’ny koperativa no mahazo ity fanampiana amin’ny fanjakana ity fa tsy tonga any amin’ny mpitatitra tokony hahazo izany.Tsy misy mahazo ity fanampiana ity koa ny mpitatitra any amin’ny faritany. Noho izany tsy tokony hatao io fanampiana ny mpitatitra io satria mitanila.
Mbola olana hafa koa iny raharaha fanampian’ny fanjakana iny fa ny fahasahiranan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny no tena olana. Rehefa miakatra ny solika dia miakatra ny vidim-piainana. Mbola hitombo indray izany ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fisondrotan’ny vidin-tsolika izao.
Mahakasika ny vidin-jiro amin’ny Jirama dia nanambara ingahy minisitra fa io no vokatra ny fampidinana ny vidin-jiro tamin’ny 2009 izay nataon’ny fanjakana Tetezamita.